Nhau - Pe pombi hunhu uye chiyero chekushandisa
Mune iyo yekudonha mvura uye negadziriro yemvura, mapaipi chikamu chakakosha chayo, saka mhando yemapaipi inoita chinhanho chakakosha. Kubva pane zvakaitika zvakapfuura, zvichienzaniswa nepurasitiki kana pombi dzesimbi, pe mapaipi ane anotevera maitiro:
① Low arambe achirema, mukuru simba, zvakanaka kuoma;
② Iyo haina kupisa ngura, iri nyore kupenda, uye ine yakanaka yekudzivirira zvinhu.
Construction Inovaka kuvaka, yakapusa uye nekukurumidza kumisikidza, uye yakaderera yekugadzirisa mutengo.
Kubva pane izvi zvitatu zvinobatsira zvepaipi pombi, inogona kushandiswa mukupa mvura uye masystem emvura, kurima kwekudiridza mvura, zvicherwa zvekufambisa mumigodhi, uye kudziyisa gasi.
Mushure mekunzwisisa kupfupi zvakanakira mapaipi ePe, ngativerenge mamiriro ayo ekushandisa quo. Munyika dzakasimukira nematunhu ekunze, mapaipi ePE anoverengeka anodarika makumi mapfumbamwe muzana emapayipi egasi akavigwa mukati meguta, uye mugove wemusika wepombi dzinopa mvura dzasvika pa60%, uye nyika dzekunze dzakagadzira mapaipi akura kwazvo ePE. Iyo yakajairwa yekuvaka tsananguro. Sezvo kwakakurudzira mapaipi achirambidzwa zvishoma nezvishoma muChina, PE mapaipi ane mukana wemakwikwi muminda yekuvaka mvura. Mune maindasitiri senge gasi, yekupa mvura mvura, kutaurirana, uye kudiridza kwekurima, mapaipi ePE ari kuratidzawo kukurumidza kukura maitiro. Iyo pombi zviyero uye maratidziro haana kuramba kumusoro, izvo zvakakanganisa iko kushandiswa uye kuvandudzwa kwepeipi pombi kusvika kune imwe nhanho.
Kune nzira dzakawanda dzekupatsanura dzemapaipi ePE, uye kune nzira dzakasiyana dzekupatsanura zvinoenderana nematanho akasiyana. Zvinoenderana nechinangwa, inogona kuve yakakamurwa kuita yekuvaka uye yemasipareti yekupa mvura uye mapaipi emvura, epombi gasi ekunze, mapaipi ekudiridza ekurima, pombi dzetambo, pombi dzetsvina, nezvimwewo Zvinoenderana nehunhu hwepombi uye chimiro, mapaipi ePe anogona kukamurwa kuita akajairwa PE mapaipi, aruminiyamu-epurasitiki anosanganisira mapaipi, simbi-epurasitiki macomputer mapaipi, simbi-epurasitiki macomputer mapombi, akasimbisa mapaipi, imwechete / mbiri-madziro makomba mapombi, epombi mapaipi, silicon yepombi pombi dzedenga tambo, nezvimwewo. Zvinoenderana nehukuru hwezvinhu zvakagadzirwa, inogona kukamurwa kuita machubhu ehupamhi, mashoma machubhu uye epakati-machubhu machubhu.